Momba ny UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Momba ny UAE
Ny Emira Arabo Mitambatra (UAE) dia nambara ho fanjakana masiaka tamin'ny faha-2 desambra 1971, taorian'ny fanaraha-mason'ny Anglisy. Ny UAE dia ahitana Emirates 7, izay i Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, ary Fujairah, miaraka amin'i Abu Dhabi voafidy ho renivohitra.
Ireo firenena mpifanolo-bodirindrina amin'ny Hoalan'i Persia.
Ny tompon'andraikitra federaly UAE dia ahitana ny filankevitra ambony ao amin'ny UAE, izay fahefana ambony indrindra momba ny lalàmpanorenana ao amin'ny firenena ary ahitana ny mpitondra ny Emirates fito, ny filohan'ny UAE, ny filoha lefitra, ny praiminisitra, ny filankevitra nasionaly federaly ary ny mpitsara federaly .
Ny UAE dia any amin'ny ilany atsinanan'ny Saikinosy Arabo, izay mihanaka amin'ny ampahan-dranomasin'ny Oman sy ny morontsiraka atsimon'ny Telok Persianina. Any andrefany sy atsimon'ny firenena dia Saudi Arabia, any avaratra dia Qatar, ary i Oman no eo atsinanana. Mihoatra ny 82,880 km2 ny firenena, ary ny Abu Dhabi dia mitentina 87 isan-jaton'ny isam-ponin'ny tany.
Tany am-boalohany dia honenan'ireo mpanondrana ranomasina izay niova ho finoana silamo tamin'ny taonjato faha-7. Na izany aza, tao anatin'ny taona maro dia nisy sekta iray mpanohitra antsoina hoe Carmathians, nametraka sheikdom mahery, ary nandresy an'i Meky. Tamin'ny fanakorontanana ny sheikdom dia lasa piraty ny olona ao aminy.
Ny piraty dia nandrahona ny Muscat sy Oman Sultanate tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19, izay nampahatezitra ny fidirana an-tsehatry ny Anglisy izay nanatanteraka fizarana fanavotana tamin'ny 1820 ary fanavaozana maharitra tamin'ny taona 1853. Ary noho izany dia nantsoina tamin'ny morontsiraka Trucial ny morontsiraka taloha. Ireo fanjakana Trucial sivy dia niaro ny Anglisy, na izany aza, tsy notidiana izy ireo ho zanatany.
Tamin'ny 1971, ny Britanika dia nihataka avy tao amin'ny Hoala Persiana, ary ireo firenena Trucial dia lasa federasionina antsoina hoe Emirates Arabo Mitambatra (UAE). Na izany aza, Bahrain sy Oman, roa amin'ireo Trucial fanjakana dia nandà ny hiditra ho mpikambana ao amin'ny federasiona, izay nahatonga ny isan'ny fanjakana fito. Nisy fifanarahana fiarovan-tena miaramila niaraka tamin'ny Etazonia tamin'ny 1994 ary iray hafa any Frantsa tamin'ny 1995.
Ny Emirà Arabo Mitambatra dia manana toetrandro mafana sy mando any amin'ny morontsiraka ary na dia mafana kokoa sy maina any anatiny aza. Ny orana mihena 4 ka hatramin'ny 6 santimetatra isan-taona, na dia miovaova isan-taona izany aza. Ny hafanana amin'ny volana Janoary dia 18 ° C (64 ° F), ary amin'ny volana Jolay, ny hafanana dia 33 ° C (91 ° F).
Mety hahatratra 46 ° C (115 ° F) ny morontsiraka amin'ny fahavaratra ary ny 49 ° C (120 ° F) na mihoatra ny any an-tany efitra no mety hahatratra ny fahavaratra. Rivotra fantatra amin'ny anarana hoe shamal amin'ny mamatonalina sy fiandohan'ny fahavaratra manomboka amin'ny avaratra sy avaratra andrefana, mitondra fasika sy vovoka.
Ny olona sy ny kolontsaina
Ny UAE dia mirehareha amin'ny vahoaka eo an-toerana izay mahatoky sy mahatsiaro tena, izay mankatò tanteraka amin'ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao teo aloha. Ity mponina eo an-toerana ity dia mamorona ampahatelony amin'ny mponina ao Emirates. Ny ambiny dia ankamaroan'ireo sesitany sy ny fianakavian'izy ireo, izay ny Azia Atsimo no lehibe indrindra.
Ny ampahany lehibe koa dia misy ny Arabo avy amin'ny firenena hafa ankoatra ny Emirates Arabo Mitambatra sy Iraniana. Tato ho ato dia maro ny Azia Atsimo-Atsinanana, izay ahitana Filipina no nifindra nankany UAE tamin'ny isa maro nitady ny asa isan-karazany.
Ny ampahany lehibe amin'ny mponina dia mifantoka amin'ny tanànany amoron-tsiraka, na dia mitombo ihany koa aza ny fametrahana ny araben'i Al-'Ayn anatiny.
Ny fomban-kolontsaina ao amin'ny UAE dia miorina mafy amin'ny finoana silamo ary miray amin'ny tontolo Arabo midadasika, indrindra amin'ireo firenena mifanakaiky ao an-tampon'ny Teles Persianina. Tena nisy fiantraikany mafy tamin'ny firenena ny fitsanganan'ny finoana Islamika, na dia tsy hentitra loatra toy ny any Arabia Saodita aza ny finoana ao amin'ny Emirates. Na eo aza ny fampandehanana an-tanàn-dehibe sy ny vondrom-piarahamonin'ireo mpila ravinahitra mitombo, dia mbola mijanona ho matanjaka avokoa ny fampahafantarana ireo foko ao
Ny toekarenan'ny UAE dia toekarena voafehy an'ny solika, izay amboarin'ny Abu Dhabi Emirate. Izy io dia ahitana ny iray amin'ireo fifantohana lehibe indrindra momba ny tahirin-tsolika voaporofo eran-tany, izay manampy betsaka amin'ny tetibolam-pirenena.
Na izany aza, ny toekarenan'ny Emirate any Dubai dia mifototra amin'ny orinasam-barotra izay miorina amin'ny solika, izay no antony mahatonga azy io ho habaka ara-barotra sy ara-bola ho an'ny firenena ary hitarika ny firenena amin'ny fanitarana ny toe-karena.
Ny famokarana fambolena dia miorina amin'ny Raʾs al-Khaymah sy ny Al-Fujayrah Emirates. Na izany aza, tsy mandray anjara betsaka amin'ny vokatra an-trano izany ary mampiasa latsaky ny ampahafolon'ny mpiasa.
Ny Burj Khalifa dia iray amin'ny tranobe malaza indrindra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra ary mitazona ny lohatenin'ny tranobe avo indrindra eran'izao tontolo izao. Tsy vitan'ny hoe mitazona io anaram-boninahitra io ihany, fa izy koa no rafi-pitaterana avo indrindra avo indrindra eto an-tany, farafaharatsiny fanaraha-maso ambony indrindra eto an-tany ary misy ny haingam-pandeha mitaingina ny halavirana lavitra indrindra eto an-tany. Ny fomba fijery manjelivezy manerana ny Emirate any Dubai ary ankoatr'izay dia fampisongadina ny fitsidihan'ny ankamaroan'ny mpizaha tany.
Jebel Jais no haingany fara tampony ao amin'ny Emirates Arabo Mitambatra ary hita ao amin'ny Emirate of Ras Al-Khaimah. Talohan'izay, dia sarotra ny nidirana, saingy noho ny lalana mihodina mihemotra sy mihodina hatramin'ny fiakarana tendrombohitra, nanjary mora kokoa ny niditra tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny Louvre no tranombakoka UAE vaovao sy mahavariana indrindra. Mitaky ny fitsangatsanganana ny tantaran'ny olombelona ny mpitsidika miaraka amin'ireo zavatra noforonina avy amin'ny vazan-tany rehetra ary avy amin'ny sokajin-taona samy hafa dia mampiseho ny fifandraisan'ny kolontsaina. Ity tranom-bakoka mahaliana ity dia manana azy rehetra, hatramin'ny tantara tany am-piandohana ka hatrany amin'ny taonan'ny empirika lehibe sy ny zavakanto maoderina. Ny maritrano farany maoderina no hita maso.
Miaraka amin'ny morontsiraka midadasika toy izany, tsy mahagaga raha manana morontsiraka be dia be ny UAE. Ny sasany amin'izy ireo dia misy ny moron-tanànan'ny tanàna eo amoron'ny morontsirak'i Dubai izay mifanandrify amin'ireo tilikambo avo be any ambadika, ny torapasika volamena amin'ny lalana manamorona ny nosy Abu Dhabi, avy any Ajman ka hatrany amin'ny Emirazin'i Fujairah.
Tsy hita isa ny safidy. Ary koa, misy fantsom-baravarankely mitokana amin'ny trano fandraisam-bahiny marobe ao Dubai sy Abu Dhabi, izay mety ampiasain'ny tsy vahiny fa andoavambola. Ny ankamaroan'ny mponina any an-toerana dia manolotra fanatanjahantena rano toa ny fisitrihana, fanondranana jet, ski ary mitsangantsangana.